गायिका मेलिना र कमल खत्रीको बिहेको कुरा के हो? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / गायिका मेलिना र कमल खत्रीको बिहेको कुरा के हो?
गायिका मेलिना र कमल खत्रीको बिहेको कुरा के हो?
admin September 7, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 86 Views
काठमाडौँ।गायिका मेलिना मैनालीले ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’को तेश्रो सिजनमा सहभागीता जनाएपछि उनको चर्चा एकाएक चुलीयो । झापा एक सामान्य परिवारमा जन्मेकी मेलिना अहिले निकै ब्यस्त गायीका बनेकी छन् । उनलाई दिनमा एउटा गीतको अफर आउने गरेको छ ।
भ्वाइसमा सहभागी हुनुअघि पनि उनी गीत त गाउँथिन् तर चर्चित हुन सकेकी थिइनन् । तर भ्वाइसवाट उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन पाएकी छन् राम्रो स्वर भएको कारण ले मेलिनाले अहिले सम्म धेरै गीतहरु बजार मा ल्याइएकि छिन।मेलिनामा यस्तो स्वर छ कि उनको स्वरमा जो कोहि
पनि फिदा हुन्छन। मेलिनाको घरको स्थिति कम्जोर भएको कारण ले उनले यो कलाकारिता क्षेत्र लाई अगाडी बढाउन सकेकी थिइनन्। तर अहिले उनको दैनिकी फेरीएको छ
करिअर सुखद तरिकाले अगाडि बढ्दै गर्दा मेलिनाको प्रेम चर्चा पनि सुरु भएको छ । गायक कमल खत्रीसँग नजिक
रहेकी मेलिनाको नाम कमलसंग जोडिएको छ । उनीहरु प्रेममा रहेको चर्चा छ । तर, मेलिना कमल खत्री आ”फ्नो प्रेमी नभएको बताउँछिन् ।उनले भनिन्–‘यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि कसैले मलाई साथ दिएको छ । कमलजी मेरो प्रेमी नभएर अभिभावक हुनुहुन्छ ।’
“पछिल्लो समयमा यसरी विभिन्न सेलि”ब्रेटी हरु विच को सम्बन्ध भन्दै नाम जोडिने तर अन्तमा बिहे भने अर्कै सँग हुने गरेको कयन अनुभव छ रमेश प्रसाई र कल्पना दाहाल अनि पल शाह र आचल शर्मा अन्तमा आचलले पनि पल सँग बिहे नगरेर अर्कै सँग विहे गरिन् र रमेशले पनि त्यहि गरे
Previous प्रहरीकी छोरीलाई २ महिना अघि बुहारी बनाएर भित्र्याए, ससुरा जेठाजु मिलेर सबै लुगा खोलेर खुर्सानी हालिदिए
Next गायिका विष्णु माझी र श्याम बीच भयो फोनवार्ता, ”म ठिक छु भाइ मेरो चिन्ता नगर” (भिडियो हेर्नुस्)